FDA waxay ka digtay marin habaabinta sheegashooyinka xashiishada • Drugs Inc.eu
Bogga ugu weyn cannabis FDA waxay ka digaysaa marin habaabinta sheegashooyinka xashiishadda
albaabka Ties Inc. 6 May 2022
maqaal by Ties Inc. 6 May 2022
Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Mareykanka (FDA) ayaa uga digay shirkadaha iibinaya CBD iyo alaabada xashiishadda, oo ay ku jiraan delta-8 THC, inay ka soo horjeestaan ​​sheegashooyinka aan la taageerin ee ku saabsan faa'iidooyinka caafimaad ee alaabooyinka.
FDA waxay sheegtay in iyada oo cilmi-baaris aad u yar lagu sameeyay delta-8 THC, xarun laga helay geedka sativa cannabis, dukaamada online-ka ah iyo kafateeriyada ayaa sheeganaya in alaabooyinka ku jira xaruntu ay yareeyaan walaaca ama hurdadu. Delta-8 waxaa laga soo qaatay qayb la mid ah dhirta marijuana sida CBD.
1 Sheegashada beenta ah ee ku saabsan faa'iidooyinka xashiishadda
2 Qaybta xashiishadda oo kaliya oo lacag caddaan ah
Sheegashada beenta ah ee ku saabsan faa'iidooyinka xashiishadda
FDA waxay sheegtay in dhowr qof la dhigay isbitaal ka dib markii ay qaateen delta-8 waxayna warqado digniin ah u dirtay shan shirkadood - ATLRx, BioMD Plus, Delta 8 Hemp, Kingdom Harvest iyo M Six Labs - oo lagu eedeeyay inay sameeyeen sheegasho been ah oo ku saabsan faa'iidooyinkeeda.
"FDA waxay si qoto dheer uga walaacsan tahay caannimada sii kordheysa ee delta-8 THC alaabta lagu iibiyo online iyo dukaamada dalka," ayay tiri Janet Woodcock, Ku xigeenka Wakiilka FDA. "Waa arrin aad looga naxo in qaar ka mid ah cuntooyinka la baakadeeyay oo lagu calaamadeeyay siyaalo soo jiidan kara carruurta."
Ka-hortagga FDA-da ee delta-8 waxay ku soo beegantay xilli sharciyada marijuana, ee weli federaalku mamnuucay, ay socdaan. Waxaa jirta dardar cusub oo Congress-ka ah, oo ka socda sharci-yaqaannada labada dhinac ee waaweyn, si loogu oggolaado shirkadaha xashiishadda inay isticmaalaan adeegyada bangiyada, taas oo noqon doonta tallaabo muhiim ah oo lagu dhisayo sharcinimadooda Maraykanka.
Qaybta xashiishadda oo kaliya oo lacag caddaan ah
Mamnuucidda federaalka ee xashiishadda ayaa ku qasbaysa shirkadaha xashiishadda inay ka ganacsadaan lacag caddaan ah, taasoo ka dhigaysa bartilmaameed tuugo. "Tani hadda waa ganacsi lacag caddaan ah oo kaliya ah. Khatar bay u tahay shaqaalaha," Murray, oo xubin ka ah guddiga shirarka Senate-ka ee hogaaminaya wada xaajoodyada qabyo qoraalka ugu dambeeya ee sharciga, ayaa u sheegay Hill. "Waxay khatar ku tahay macaamiisha iyo shaqaalaha waana la xallin karaa."
Kooxaha, oo ay ku jiraan Ururka Bangiyada Mareykanka, ayaa u ololeynaya sharci-dejiyeyaasha si ay u soo bandhigaan sharci kaligiis ah oo u oggolaanaya bangiyada inay bixiyaan adeegyo bixiyeyaasha xashiishadda. Waxay ku andacoonayaan inay wax ka tari doonto dhimista dembiyada iyo kordhinta dakhliga cashuuraha. Steve Daines, oo ah senatar ka tirsan xisbiga Jamhuuriga, ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay in sharcigan uu ka heli doono codadka loo baahan yahay labada sharci-dejiyaha GOP iyo Dimuqraadiga.
Bishii la soo dhaafay, sharci ka mamnuucaya marijuana heer federaal ah ayaa waxaa meel mariyay Aqalka Wakiilada Mareykanka. Si kastaba ha ahaatee, wali looma codayn aqalka Senate-ka, Joe Biden-na wali ma uusan taageerin fikradda, inkasta oo uu ballan qaaday inuu taageerayo ciqaabta dadka isticmaala xashiishadda intii lagu jiray ololihiisii ​​​​madaxweynaha.
Xigasho: theguardian.com (EN)
Maxaad u baahan tahay inaad ka ogaato CBD si looga baxo opioid?
500 kiilo oo kookayn ah ayaa laga helay shixnadda qaxwada Nespresso
Jane Technologies: Shopify of Cannabis
Jidhkaaga sii nasasho CBD
Sidee loo isticmaali karaa kansar-ka loo yaqaan 'cannabis'?